Nandray ireo solontena avy amin’ny CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) avy any Montpellier-Frantsa ity tompon’andraikitra ity. Voaresaka tamin’izany ny hisian’ny fitsidihana ireo toeram-pambolena fary ao Nosy-Be Hell-Ville. Hojerena manokana ny fambolena ireo zana-pary hafa karazana any amin’ireo toerana voatokana izay hoentin’ireo vahiny avy any ivelany. Tanjona amin’izao fiaraha-miasan’ny CIRAD sy ny CMCS ao Nosy-Be izao ny hanatsarana ny voly fary eto Madagasikara mba hahazoana vokatra tsara sy azo aondrana mankany ivelany. Haparitaka amin’ny toerana maro ny voly fary manaraka ny kalitao sy ny fitakian’ny firenena hanondranana ny entana. Tanjona ny hamokaran’i Madagasikara siramamy ary hahaleotena ara-bokatra isika ary ho afaka manondrana amina firenena maro mila izany ka hanaraka ny kalitao izay tadiavina ny vokatra, hoy hatrany ny tale jeneraly Rakotomalala Miharisoa.